Macalin Maxamuud oo ku gacan seeray kulan uu ka dalbaday Kheyre. - Awdinle Online
Macalin Maxamuud oo ku gacan seeray kulan uu ka dalbaday Kheyre.
Wararka naga soo gaaraya Magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa sheegaya in Ra’iisul Wasaarihii hore ee XFS Xassan Cali Kheyre uu xiriir taleefoon la sameeyay Hoggaamiyaha Ahlusunna Macalin Maxamuud Sheikh Xassan oo uu ka dalbadey in ay wada qaataan kulan is cafin ah, maadaama xurguf culus ku dhex martay dhismihii maamulka Galmudug ee horaantii sanadkan.
Wararka horudhaca ah oo ay heshay Shabakadda wararka Awdinle Online ayaa waxaa ay sheegayaan in Macalin Maxamuud oo Kenya kusugan uu diiday dalabka Kheyre iyo in ay is arkaan isagoo u cuskadey in uu dhibaato badan mariyay xiligii uu kursiga joogay.
Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa xalay gaaray Magaalada Nairobi ee dalka Kenya, isaga oo halkaasi ka wada ololihiisa doorashada maadaama uu dhawaan ku dhawaaqay in uu yahay musharax Madaxweyne.
Previous articleSoomaaligii lagu waayay inuu ku lug lahaa weerarkii Westgate oo la afduubtay
Next articleGuddoomiye Cusmaan Barre oo ku dhawaaqay qorsho ku saabsan doorashooyinka Hir-Shabeelle